Qoorqoor, iyo Guudlaawe oo mucaaradka mujaamaleynaya | KEYDMEDIA ONLINE
Qoorqoor, iyo Guudlaawe oo mucaaradka mujaamaleynaya
Kulan xalay dhex maray, Golaha Midowga Musharaxiinta, Madaxweynayaasha Maamullada Galmudug iyo HirShabeelle, ayaa ku soo dhamaaday is faham-waa, waxaana lagu kala tagay shirka kadib markii uu hareeyay buuq, qaar ka mid ah Musharixiintuna ay ka baxeen kulanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynayaasha Maamullada Galmudug iyo HirShabeelle, oo labo kulan oo mira dhalay dabayaaqadii todobaadkii hore la qaatay Mucaaradka, ayaa la filayay, in ay si buuxda xalay u caddeyaan mowqifkooda ku aaddan muddo kordhinta, hayeeshee, waxa ay madasha keeneen fariin ay ka sideen Farmaajo oo ah inuu la kulmo Murashixiinta.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa ku gacan seyray farriinta uu Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo u soo dhiibay Qoorqoor iyo Guudlaawe, taas oo ah mid aan xilligaan loo baahneyn, waxaana kulanku kusoo dhamaaday buuq.
Ujeedka Kulankaan ayaa ahaa, in Madaxweynayaashu ku soo celiyaan Marashixiinta, waxa ay kala kulmaan Farmaajo, kadib markii ay habeenkii Jimcaha codsadeen in ay dib ugu labtaan ka hor inta aysan qaadan go’aan rasmi ah, waxayse wali u muuqdaan in ay ku daaban yihiin Madaxtooyada.
Xubno uu ka mid yahay hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa si adag ula hadlay Qoorqoor iyo Guudlaawe, wuxaana laga dalbay in ay meereysiga joojiyaan oo ay mowqifkooda caddeeyaan, taas oo sababtay in kulanka uu ka dhasho buuq, ugu danbeynna lagu kala dareero.
Madaxweynayaasha Maamullada Galmudug iyo HirShabeelle, ayaa Jimcihii ballan qaaday in ay Maalinta Isniinta ah Shirweynaha Beelaha Hawiye, ka caddayn doonaan Mowqifkooda, waxayse u muuqdaan in ay is badaleen, oo ay wali Farmaajo ku hoos jiraan.
ay wadeen Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle oo ahaa codsi ka yimid Madaxweyne Farmaajo inuu la kulmo Musharaxiinta.
Ilo ku dhow dhow shirka ka socda guriga Madaxweyne Qoorqoor ayaa sheegaya inuu isaga soo baxay C/raxmaan C/shakuur, kaddib markii Qoorqoor iyo Guudlaawe ay shirka la yimaadeen wixii ay ka sugayeen wax aan aheyn oo ah inay farriin sidayaal noqdeen, halka markii hore laga sugayay inay mowqif cad ka qaataan muddo kordhinta labada sano oo wixii ay kala soo kulmeen Farmaajo ka sheegaan shirka maalinta Isniinta.